Izindatshana Zamalunga Nezindawo Zokuhlobisa I-Carta In - Palermo
Imihlobiso, amabhaluni, imidwebo yetafula enezingqimba nakho konke kwasekhaya nesikole!
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-15)
Ikhadi Lingenile eVilla Florio 56/58 a Palermo ukuthengisa Imibhalo yamaqembu, imihlobiso e Izinto zasendlini ukuthengisa iminyaka engama-25. Uzothola konke okudingayo ukugubha kangcono imicimbi ebalulekile nezinto zansuku zonke.
I-Party Articles Carta In ePalermo - Imihlobiso nakho konke kwamaholide
Ikhadi Lingenile yisitolo esithengisayo Imibhalo yamaPhathi kanye nemihlobiso okwangempela futhi kumnandi. Uma umfishane imibono, hamba ubheke ukusesha kwemihlobiso Izinto zephathi okulungele wena: imihlobiso, amapuleti, izingilazi, izindwangu zamatafula ezihlotshisiwe nemihlobiso yazo zonke izinhlobo. Uzothola konke okudingayo ukuhlela iphathi, ngaphezu kwalokho Izihloko kwesikole, Izinto zasendlini nokunye okuningi. Okomhlangano, ngokuqinile ihlobo kanye namaqembu ngokujwayelekile, vumela ukulingeka imihlobiso bese uqhubeka Izinto zephathi di Ikhadi Lingenile. Ukuhlela imicimbi kuzoba umoya nomoya ngalezi Izinto zephathi.
I-Party Articles Carta In ePalermo - imihlobiso kaKhisimusi
Ikhadi Lingenile eVilla Florio a Palermo yindawo yokuthola Imibhalo yamaPhathi kanye nemihlobiso, njengamabhaluni, ukuthokozisa umkhathi. Nge Ikhadi Lingenile une ukucabanga nje ukuzijabulisa! Inika isipiliyoni, ubuciko kanye nokuthinta ubuqambi ekukhetheni nasekufezekiseni Imibhalo yamaPhathi kanye nemihlobiso maqondana nokuthandayo, kungaba kwendabuko noma kubehaba ngokweqile. I-Carta In ePalermo yisisombululo esifanele uma ufuna Imibhalo yamaPhathi kanye nemihlobiso okushiya uphawu lwazo ezingqondweni zezivakashi. Izingoma zabo zokubhaluni ziyimisebenzi yangempela yobuciko. Thenga Imibhalo yamaPhathi kanye nemihlobiso kusuka kubo kuyisiqinisekiso sokuphumelela kwamaqembu wakho.
Amaphepha wePhepha Party EPalermo - Imibhalo Yekhaya
Ikhadi Lingenile kungagcini lapho Imibhalo yamaPhathi kanye nemihlobiso, futhi kuphatha Izinto zasendlini. Impilo yansuku zonke ehlanzekile idinga i-panache: thenga Izinto zasendlini nge- ngokuqinile emndenini, njengezitsha zamatafula, nokudla kwansuku zonke. Ukungasho abanye Izinto zasendlini njengezinkomishi, obhasikidi nemibono ewusizo yokuhlela kangcono isikhala sakho. TO Palermo da Ikhadi Lingenile ubuqambi abuphumeleli futhi buzokuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ikhaya lakho Izinto zasendlini lokho kuzofaka noma ngubani esimeni esihle. Thatha uhambo kusuka Ikhadi Lingenile.
Imibhalo yamaPhathi wePhepha kuPalermo - Ukukhetha okubanzi kokuhlobisa nokuningi
Esitolo Ikhadi Lingenile eVilla Florio 56/58 a Palermo kukhona okonakalisiwe kuphela ongakukhetha mayelana Imibhalo yamaqembu, imihlobiso e Izinto zasendlini kepha akupheli lapha! Amadayari esikole, amathoyizi ase-plush, izikhwama zasolwandle, izikhwama zasemuva, amaswidi anjengamashmallows nokunye okunjalo kuyatholakala. Ikhadi Lingenile ngamafuphi, ibanga okuningi maqondana nokungena kwalo ekuhlangabezaneni nezidingo zawo wonke umuntu, noma ngabe bakukhonza Imibhalo yamaPhathi kanye nemihlobiso noma ngabe ufuna okuthile okusebenzayo. Futhi, uma unebhizinisi futhi udinga umphakeli oqinile futhi onokwethenjelwa kukho konke okuhlobene nephepha lokudla ongathinta kulo Iphepha elithe xaxa! Zama Imibhalo yamaqembu, imihlobiso, Izinto zasendlini noma zesikole? Indawo yakho ikhona I-Carta In ePalermo.
Ikheli: I-Via Villa Florio, 56/58
I-POSTAL CODE: 90138
Ucingo: 091 6522319
Umakhala ekhukhwini: 320 3064221
Inombolo ye-VAT: 06318310825